Biyyoonni Afrikaa afur gulaala waancaa addunyaatiin ala ta'an
Biyyoonni Afrikaa afur gulaala waancaa addunyaatiin ala ta'an Featured
Walmorkiin waancaa kubbaa miilaa addunyaa 21fan ummanni addunyaa miira olaanaadhaan guyyaa guyyaadhaan hordofaa jiru ittifufeera. Taphawwan hanga ammaatti adeemsifamanitti biyyoota Afrikaa shan keessaa afur mo'amuudhaan gulaalaa ala ta'aniiru.
Walmorkii kanarratti Afrikaa bakka bu'uun Misir, Tuniziyaan Morookoon, Naayijeeriyaafi Senegaal kan hirmaatan yoo ta'u, Seenigaaliin ala afransaanii gulaalaa ala ta'uu yeroomaan galaniiru.
Akkasumas biyyoonni Eeshiyaa bakka bu'uun hirmaatan shan keessaa, Jaappaaniifi Koriyaa Kibbaatiin Saudii Arabiyaa, Iraaniifi Awustiraaliyaan akkuma kan Afrikaa yeroon geggeeffamaniiru.
Taphawwan adeemsifamanitti ramaddii tokkoffaarraa Uraaguwaayiifi qopheessituun waancichaa Ruusiyaan, lammaffaarraa Ispeeniifi Poorchugaal, sadaffaarraa Faransaayiifi Deenmaarki, afraffaarraa ammoo Kirooshiyaafi Arjantiinaan walakkaa maahessaatiif darbaniiru.
Akkasumas Ramaddii shanaffaarraa Biraaziifi Siwiizarlaandii, jahaffaarraa Meekisiikoofi Koriyaan Kibbaa, torbaffaarraa Ingilizifi Beeljiyeem, saddeetaffaarraa ammoo hanga kaleessaatti Jaappaan darbuun yoo beekamu mo'ataa Senegaaliifi Kolombiyaa hin beekamne.
Walmorkiiwwan Roobii darbe adeemsifamanitti Biraaziil Sarbiyaa, Koriyaan Kibbaa Jarman qabxii walfakkaatu, 2-0n yoo mo'atan, Siwiidiin Meeksiikoo 3-0n, Siwiizarlaandiifi Kirooshiyaan 2-2n adda ba'aniiru.
Ameerikaa Kibbaa bakka bu'uun biyyoota hirmaatan shanan keessaa Uraaguwaay, Biraaziliifi Arjantiinaan tapha ittaanuf yoo darban, kan Kolombiyaa tapha kaleessaatu murteessa jedhamee eegama. Peeruun yeromaan gara biyyasheetti deebiteetti.
Biyyoota 16n tapha walakkaa maaheessaatiif darban keessaa Kirooshiyaafi Uraaguwaayi taphawwan adeemsifatan mara mo'atanii qabxii sagal sagal galmeessisuun ramaddiisaaniiraa tokkoffaadhaan darbaniiru.
Awurooppaa bakka bu'uun tan hirmaatte Faransaayi gamasheetiin taphawwan gulaalaa ramaddii sadan taasifattetti lamatti mo'achuudhaan tokkotti walqixa ba'uudhaani kan dabarte.
Ameerikaa Giddugaleessaa bakka bu'uun tan hirmaatte Meeksiikoon, kanneen Awurooppaa Ingilizii, Siwiidiniifi Beeljiyeemis taphawwan adeemsifatanitti lama lamatti mo'achuudhaan tokkotti mo'amuun qabxii jaha jaha galmeessisuuni gulaala ittaanuf kan darban.
Walmorkii waancaa kubbaa miilaa Addunyaa baranaatti yeroo shan waancaa kan fudhatteefi hundarrattuu hirmaatte, Biraaziil taphawwan adeemsifattetti ejjennoonshee amansiisaa waan ta'eef biyyoota waancaaf kaadhimaman keessaa kan duraa taateetti.
Akkasumas si'a afur waancaa kan fudhatteefi muuxannoo dheeraa tan qabdu Jarman taphawwan adeemsifattetti tokkotti mo'achuudhaan lamatti mo'amuun yeroomaan gulaalaa ala taateetti.
Jarman waancaa kubbaa miilaa 20fa bara 2014 Biraazilitti adeemsifametti shaampiyoonaa ta'usheetti daaw'ataan kubbaa miilaa kan baranaa kanas ni fudhatti jedhee otoo eegaa jiru gulaalaa darbu dhabuunshee Jarmanoota bira taree leellistoota tapha kubbaa miilaa ajaa'ibsiiseera.
Afrikaarraa yeroo baayi'ee shaampiyoona ta'uun tan beekamtu Misir taphawwan ramaddii adeemsifattetti qabxii malee harka duwaa sadarkaa dhumaarra qubachuudhaan gulaalaa ala ta'uunshees ajaa'iba jedhameera.
Sababnaas gareen ishee taphataa beekamaa Ahmad Saalaafi taphattoota kilaboota biyyoota Awurooppaaf taphataniin waan ijaarameef yeroomaan mo'amuun ishee dinqisiisadha.
Yeroo lama waancaa Addunyaa fudhachuudhaan kan beekamtuufi taphataa beekamaa adunyaa, Leeweenii Meesiifi taphattoota beekamoodhaan kan ijaarame gareen Arjantiinaan tapha gulaalaa kanarratti ejjennoon argamsiisan gammachiisaa miti.
Karaa gara biraatiin osoo hineegamin taphawwan adeemsifate mara mo'achuudhaan qabxii sagaliin tapha ittaanuf kan dabarte Kirooshyaan daaw'ataa biratti waancaaf kaadhimamteetti
Kirooshiyaa tapha waancaa kubbaa miilaa Addunyaarratti yeroo afraffaa kan hirmaatte yoo ta'u, tapha gulaalaa duraarratti ejjennoon isheen argamsiiste kan baranaa kun amansiisaadha.
Walumaagalatti walmorkiin waancaa kubbaa miilaa Addunyaa 21fan Rusiyaan keessummeessaa jirtu kun walmorkiiwwan kanaan dura adeemsifaman wajjin yoo ilaalamu kan ammaa kun dadhabaadha jedhamuun daaw'ataan qeeqamaa jira.
Qabxiinsaanii maxxansaaf nudhaqqabuu baatus walmorkiin kun kaleessas ittifufuudhaan Jaappaanifi Poolaandi, Senegaaliifi Kolombiyaan, gulaalaa ala ta'uu kan beekkatan Paanaamaafi Tuniziyaa, Ingiliziifi Beeljiyeem taphataniiru.
Torban kana/This_Week 4910
Guyyaa mara/All_Days 1642505